Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံက အလယ်အလတ်အလေးချိန်တင်ဆောင်နိုင်သော Long March-7A သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံ လွှတ်တင်
တရုတ်နိုင်ငံက အလယ်အလတ်အလေးချိန်တင်ဆောင်နိုင်သော Long March-7A သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံ လွှတ်တင်
တရုတ် ဂြိုဟ်တု , သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံ
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဟိုင်နန်ပြည်နယ် ဝန်ချန်း အာကာသယာဉ်လွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ long march-7A Y2 သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံလွှတ်တင်နေသည်ကို မတ် ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) Science & Technology
ဝန်ချန်း၊ ဟိုင်နန်၊ မတ် ၁၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဟိုင်နန်ကျွန်းရှိ ဝန်ချန်း ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ Long March-7A Y2 သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံကို မတ် ၁၂ ရက်တွင် လွှတ်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဒုံးပျံအား စီစဉ်ထားသော ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ ပေကျင်းစံတော်ချိန် နံနက် ၁:၅၁ နာရီ၌ လွှတ်တင်ခဲ့ပြီး စမ်းသပ်လေ့လာရေးဂြိုဟ်တုတစ်စင်း ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဟိုင်နန်ပြည်နယ် ဝန်ချန်း အာကာသယာဉ်လွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ long march-7A Y2 သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံလွှတ်တင်နေသည်ကို မတ် ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ယင်းဂြိုဟ်တုအား အာကာသပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့်ခြင်း အပါအဝင် အဆိုပါဂြိုဟ်တုအပေါ်၌ နည်းပညာသစ် စမ်းသပ်မှုများအတွက် အဓိကအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
Long March-7 ဒုံးပျံ၏ ခေတ်မီဗားရှင်းဖြစ်သော ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးယာဉ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်အလတ် အရွယ်အစား ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းမြင့် ဒုံးပျံမျိုးဆက်သစ်ကို ကိုယ်စားပြုထားပြီး ၎င်းဒုံးပျံသည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်ဗဟိုပြုဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်း (geosynchronous orbit) အတွက် အနည်းဆုံး ၇ တန် အလေးချိန်ပမာဏကို သယ်ဆောင်သွားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်း ဒုံးပျံလွှတ်တင်မှုသည် Long March ဒုံးပျံစီးရီး၏ ၃၆၂ ကြိမ်မြောက် ပျံသန်းမှုလည်း ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-03-12 02:47:08|Editor: huaxia
WENCHANG, Hainan, March 12 (Xinhua) -- China launched its Long March-7A Y2 carrier rocket on Friday from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's island province of Hainan.
A modified version of the Long March-7 rocket, the launch vehicle represents the new generation of China's medium-sized high-orbit rocket. It hasacarrying capacity of at least7tonnes for the geosynchronous orbit.
This was the 362nd flight mission of the Long March rocket series. Enditem
1-7- A long march-7A Y2 carrier rocket blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site, south China's Hainan Province, March 12, 2021. China launched its Long March-7A Y2 carrier rocket on Friday from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's island province of Hainan. The rocket blasted off at 1:51 a.m. (Beijing Time) from the launch site, sending an experimental satellite into the planned orbit. The satellite will be mainly used for in-orbit tests of new technologies including space environment monitoring. (Xinhua/Guo Cheng)